လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးနိုင္ငံမ်ားမွ နိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးမ်ား COVID-19 ကပ္ေရာဂါမွ ျပန္လည္နာလန္ထူေရးအေပါ္ ေဆြးေနြးခဲ့ၾက | Commerce
Fri, 07/02/2021 - 08:22 -- admin_ygn
လန်ချန်း-မဲခေါင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး (LMC)နိုင်ငံ များမှ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများသည် တရုတ်နိုင်ငံ အနောက် မြောက်ပိုင်းရှိ ချုံချင်း၌ ဇွန် ၈ ရက်တွင်တွေ့ဆုံခဲ့ကြကာ COVID-19 ကပ်ရောဂါနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုတို့အပေါ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့် အားထုတ်ကြိုးပမ်းမှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ဆဋ္ဌမအကြိမ် လန်ချန်း-မဲခေါင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးအား တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံ တော်အတိုင်ပင်ခံနှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး မစ္စတာ ဝမ်ယိနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်တို့က ဥက္ကဋ္ဌများအဖြစ် ပူးတွဲကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါအစည်းအဝေးသို့ လာအိုနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mr. SaleumxayKommasith? ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဒုတိယဝန်ကြီး ချုပ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးMr. PrakSokhonn? ထိုင်းနိုင်ငံ ဒုတိယ ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mr. Don Pramudwinai နှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mr. Bui Thanh Son တို့ လည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။လန်ချန်း-မဲခေါင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှာ လန်ချန်း-မဲခေါင်ဒေသခွဲ၌ အလျင်မပြတ် ထွန်းကားလာမှု အများဆုံးဖြစ် သည့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုယန္တရားများအနက် တစ်ခုဖြစ်လာ ကြောင်း၊ ၎င်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှာ လျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် လာကာ မှတ်တမ်းတင်ဖွယ် ရလဒ်များကိုလည်း ရရှိနေကြောင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးမှု အခွင့်အလမ်းများကို မျှဝေခံစားရန်၊ စိန်ခေါ်မှုများအား ပူးတွဲဖြေရှင်းရန်နှင့် မျှဝေခံစားကြမည့်အနာဂတ်ရှိသော အသိုက် အဝန်းတစ်ရပ် တည်ဆောက်ရေးဆီသို့ ရှေးရှု၍ လုပ်ဆောင်သွား ရန် တရုတ်နိုင်ငံက မဲခေါင်ဒေသနိုင်ငံများနှင့် အတူတကွလက်တွဲ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံတော်အတိုင် ပင်ခံနှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး မစ္စတာဝမ်ယိက ပြော ကြားခဲ့သည်။
ကပ်ရောဂါအား တိုက်ဖျက်ရေးတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အားကောင်းခိုင်မာစေရန်၊ ကပ်ရောဂါအလွန်၌ ပြန်လည်နာလန် ထူရေးလုပ်ငန်းများအား မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ရန်၊ ရေသယံဇာတ များအပေါ် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်၊ ဒေသတွင်း လက်တွေ့ကျ သောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို ပိုမိုအဆင့်မြင့်စွာဆောင်ရွက် ရန်၊ ပြည်သူများအကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုများ ပိုမိုဖြစ်ထွန်းလာ စေရေး တွန်းအားပေးရန်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုယန္တရား တိုး တက်စေရန်တို့ အပါအဝင် လန်ချန်း-မဲခေါင် နိုင်ငံများအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့် အနာဂတ်နယ်ပယ်များကိုလည်း မစ္စတာ ဝမ်ယိက အဆိုပြုခဲ့သည်။နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများက လန်ချန်း-မဲခေါင် နိုင်ငံများ၏ ခိုင်မာသော အရှိန်အဟုန်များအား ပူးတွဲ၍ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်း ထားရန်၊ မဟာဗျူဟာများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရာတွင် တကြွ်ကစွာချိန်ညှိ ဆောင်ရွက်သွားရန်၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေး နှင့် ဆက်သွယ်မှုများ အားကောင်းခိုင်မာစေရန်နှင့် ပညာရေး၊ လူငယ်ရေးရာနှင့် ဒေသတွင်းနယ်ပယ်များ၌ ပိုမိုပူးပေါင်းဆောင် ရွက်ရေး မြှင့်တင်သွားရန်တို့အပေါ် ၎င်းတို့၏ စိတ်အားထက်သန် မှုများကို ဖော်ပြခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။